Amasevisi Ekhaya - I-Airbnb
Columbus, Indiana, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Jay
U-Jay Ungumbungazi ovelele
Jabulela wonke amasevisi ekhaya kuleli khaya elithandekayo, futhi elitholakala kalula endaweni enokuthula. Le ndawo ephindwe kabili itholakala emizuzwini engu- yezindawo ezizungeze amadolobha amakhulu zase-Columbus ezakhiwe ngobungcweti, eduze namabhola ase-Lincoln Park, imizila yokuhamba ngebhayisikili kanye nemizila yabantu ingaphakathi kwamamayela. Le ndawo inezinhlobonhlobo zezintandokazi zokudlela zendawo futhi iphinde ibe yimizuzu engu-30 ukusuka e-Brown County state park nase-Nashville.
Le ndawo ehlala abantu ababili isendaweni ethulile nephephile. Iyunithi ihlanganisa i-Smart TV egumbini lokuphumula elixhunywe ku-inthanethi futhi linama-app athandwayo afakiwe ukuze izivakashi ziwasebenzise ngama-akhawunti azo akhona. Sicela wazi ukuthi i-TV ayisethiwe ngamashaneli we-cable. I-patio yangasese iyatholakala yokudlela ngaphandle.
4.88 out of 5 stars from 237 reviews
4.88 · 237 okushiwo abanye
IColumbus, ngenkathi yaziwa ngezakhiwo zayo, iphinde inikeze namanye amagugu endawo amaningi! I-Simmons Winery, iyintandokazi yendawo edumile. Kuxhunywe endaweni yokwenza iwayini i-450 North Brewery ethandwayo. I-Eclectic Zaharakos Ice Cream Parlor inikeza izintandokazi zakudala zaseMelika kusukela ngo-1900. I-ZwanzigZ Pizza iyiphabhu ewina umklomelo wotshwala kanye nendawo yokuphuzela utshwala. Indawo futhi inikezela ngokukhethwa okubanzi kwezintandokazi ze-sushi.
Izivakashi zivame ukuzingenela ngokwazo kodwa ngingatholakala ukuze ngingene noma isikhathi esiningi izihambeli zidinga usizo.
UJay Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Columbus namaphethelo